တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကိုပြူးကျယ်သို့ ပေးစာ … အပိုင်း (၅)
ပြက္ခဒိန်ကြည့်လိုက်တော့ ဒီနေ့ဟာ ကိုပြူးကျယ် အတွက် စာရေးရမယ့် နေ့ပဲ လို့ သတိရတာနဲ့ ရေးမယ့် စာအုပ်ကလေး ပြန်ကိုင်ရပြန်တယ်။ တပတ်လုံးလုံး ဒီစာအုပ်ကို ပစ်ထားခဲ့မိကြောင်း ၀န်ခံလိုက်ပါရဲ့ရှင်။
အခုဆို … ကျမတို့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ရာသီပြောင်းချိန် ရောက်လုပြီပေါ့ ကိုပြူးကျယ် … ။ ဆောင်းအနှောင်း နွေအကူး မို့ မနက်ခင်းမှာ အေးသလိုလို ရှိပေမဲ့ နေ့ခင်းကျပြန်တော့ အိုက်စပ်စပ်နဲ့ နေရခက်လှတယ်။ ဖျားကြ နာကြသူတွေလည်း များပါဘိသနဲ့ … ။ မနေ့ညက ကြီးတော်ကြီး နေမကောင်းလို့ ဆေးခန်း လိုက်ပို့မှဘဲ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူတွေ တော်တော် များပါလား လို့ သတိထား လိုက်မိပါတယ်။ ဆေးရုံ ဆေးခန်း ဆိုတာလည်း မစည်ကားအပ်တဲ့ အရပ်ပဲ မဟုတ်လား။
ဒါကြောင့်မို့ စာအကြောင်း ကဗျာအကြောင်း မရေးခင် ကိုပြူးကျယ်လည်း ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ လို့ ဦးဆုံး မှာလိုက် ပါရစေနော် … ။
ဒီနေ့တော့ လေးချိုး အကြောင်း ရောက်ပါပြီ။ စပ်နည်းပါ ထည့်ရေးပါလို့ တောင်းဆို ထားတာမို့ လေးချိုး စပ်နည်း အကျဉ်းကလေးတော့ ထည့်ရေးပေးလိုက်ပါမယ်။ လေးချိုးအခန်းမှာ လေးချိုး အမျိုးမျိုးနဲ့ နမူနာ ဖော်ပြထားတဲ့ လေးချိုးတွေကလည်း များတာမို့ အပိုင်း ၂ ပိုင်း - ၃ ပိုင်း လောက်တောင် ဖြစ်မလားဘဲ … ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စုံလင်အောင်တော့ ဖော်ပြပေး သွားပါ့မယ်။
- အချိုးအပိုင်း လေးခု နဲ့ စီကုံးထားတဲ့ ကဗျာမို့ လေးချိုးလို့ ခေါ်သလို ..ဒွေးချိုး တြိချိုး နည်းတူ ပါဠိနဲ့ ရောပြီး စတုချိုးလို့လည်း ခေါ်ကြသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
-လေးချိုးမှာ ..လေးချိုးငယ်၊ လေးချိုးလတ်၊ လေးချိုးကြီး ဆိုပြီး ၃ မျိုး ကွဲပြားပါတယ်။
လေးချိုးငယ် ကိုတော့ …လေးဆစ်သဖြန်၊ လေးဆစ်ကွန်းထောက်သဖြန် .. စသဖြင့် ခေါ်ပါတယ်။
လေးချိုးလတ် ကိုတော့ …လေးချိုးလို့သာ ခေါ်ပြီး လေးချိုးကြီးကို လေးချိုးကြီး၊ အလွန်ကြီးမားရင် မဟာလေးချိုးကြီး ဆိုပြီးခေါ်ကြပါသတဲ့။ လေးချိုးကြီးမှာလည်း ကာလပေါ်လေးချိုးကြီးနဲ့ ရှေးရိုး လေးချိုးကြီး ဆိုပြီး ရှိသလို စာဖြောင့်လေးချိုးကြီး နဲ့ စာထောင့်လေးချိုးကြီး ဆိုပြီးလည်း နှစ်မျိုး ရှိပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် သံချို ဟာလည်း လေးချိုးထဲမှာ အကြုံးဝင်တယ်လို့ ဆိုထားပါသေးတယ်။
လေးချိုး အမျိုးအစားတွေ ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
နမူနာ လေးဆစ် ရေးနည်းကတော့ အောက်ပါ အတိုင်းပါပဲ။
တူပြီပ စပ်ထုံး။ (အုပ်)
လေးဆစ် မှတ်အုံး။ (အုပ်)
ဒီ လေးဆစ်ရေးနည်း နမူနာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကာရန်တွေ ဘယ်လို ယူထားသလဲ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထူး ပြောမနေတော့ဘဲ နမူနာ လေးဆစ် ပုံစံများကိုသာ ဖော်ပြလိုက် ပါတယ်။ ဒီလေးဆစ်ကလေး တွေကလည်း ကျမတို့ အားလုံး သိဖူး ဆိုဖူးခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာမှန်း ညာမှန်းသာ မသိတာပေါ့။
ကြက်တူရွေး - အာပေါင်နီ။
ဘကြီးလာမှ-ပြော ။ … ။
(အလိုဗျာ) ပန်းနွယ်က-စိမ်း။ … ။
လှည်းယဉ်နှင့် မောင်း။ … ။
“ဘုရားငါးဆူ ပဟေဠိ လေးဆစ်”
ခေါင်းဖြီးခဲ့လေး။ … ။
လေးဆစ် နမူနာလေးတွေကတော့ ဒီမျှပါပဲ … ။ နောက်တပတ်ကျမှဘဲ လေးချိုးလတ်ကို ဆက်လက် ဖော်ပြပါတော့မယ်။ တော်ကြာ ရေးတာတွေများရင် ဖတ်ရတာ အီ နေမှာစိုးလို့ပါ။
ကိုပြူးကျယ်နှင့်တကွ ကျမ ဘလော့ကို တခုတ်တရ လာရောက်ဖတ်ရှုသူ … သို့မဟုတ် မတော်တဆ လမ်းမှား ရောက်လာရင်း ဖတ်မိသူ … ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ် လမ်းကြုံလို့ လာဖတ်သူ … ထိုထိုသူ အပေါင်းတို့အား ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာစွာနဲ့ အေးချမ်း သာယာပါစေကြောင်း ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ်ရှင် … ။
Posted by မေဓာဝီ at 4:25 AM
We are poor in material but we rich in literature. Your myanmar poems take me to my childhood and my mother's peaceful village.
i am staying inadevolved country but so stressful place .....